Knowkedge – Page 100 – Myanmar Daily News
(၇) နှစ်အရွယ် သာသနာ့ အာဇာနည် ကိုရင်ငယ်ရှင်ဓမ္မိက၏ ၈-ပါး သီလပေး(ရုပ်သံ)
ဉာဏရောင်ခြည်စွန်ဆိတ်ကျောင်းတိုက်တံဆိတ်ရွာ ငနုချောင်းအုပ်စုတန့်ဆည်မြို့နယ် ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ သာသနာ့ အာဇာနည် ဖြစ်ပါတယ်… ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်ကောင်းအပေါင်း ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားနိုင်စေရန် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်… အလွန်ပင် လေးစားကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိုယ်ရင်လေးပါပဲ . .. နောင်တစ်ချိန်မှာ သာသနာတော်အတွက် ထွန်းလင်းတောက်ပလာမယ့် ကြယ်လေးတစ်ပွင့်ပါ ထပ်ဆင့်မျှဝေခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေနော်…..
မွေးရာပါရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမလှပလို့ လူတွေရဲ့ရှောင်ဖယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ ထီရောင်းပြီး အသက် ၈၀ ဖခင်ကြီးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ သနားစရာအမျိုးသား(ပုံကိုနှိပ် ဖတ်ပါ)
ပညာမတတ်လို့ အောက်တန်းမကျဘူး၊ မချမ်းသာလို့ အောက်တန်းမကျဘူး၊ ရုပ်ရည်မလှလို့ အောက်တန်းမကျဘူး၊ လူဖြစ်ပြီး လူလိုမသိတဲ့သူကသာလျှင် အောက်တန်းကျတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့သူ ၊ သူ့နာမည်က Le Huu Hien ။အသက် ၄၃နှစ်အရွယ် Le Huu Hien ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ ထူးဆန်းတဲ့ မွေးရာပါ ရှားပါးရောဂါကို ခံစားရတဲ့အပြင် လူတွေရဲ့ ရှောင်ဖယ်ခြင်းကိုလည်း ခံနေရရှာပါတယ်။ …
ဆရာတော် ဘုရားကြီးပြောပြတဲ့ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုး ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ( ဒါကြောင့် နေတိုင်း စုတ်ထိုးနေတာများလား )
ဆရာတော် ဘုရားကြီးပြောပြတဲ့ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုး ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အိမ်ရှိလျှင် အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ရှိတတ်စမြဲ။ သူ့ စုတ်ထိုးသံ ကြား ရတတ်စမြဲ။ အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကိုလည်း လူတွေ အတိတ်ကောက်ကြလေ့ ရှိတတ်ကြရဲ့။ဘာကြောင့် အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးပါသလဲ။ အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုးခြင်းဟာ နတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတတ်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီး ဆရာ နဲ့ တပည့် လင်နဲ့မယား ဆက်ဆံရေးမှာ …
ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေထွက်နေတဲ့ ဆရာတော်ဘုရား
ကျေးဇူးတော်ရှင် ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဖူးမြော်ရသူတွေ သိကြမှာပါ..အင်မတန် မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ထွက်ရှိတာပါ….. အဲဒီလိုပဲ ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလို မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ထွက်နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးကို ဖူးမြော်ခဲ့ရသူတစ်ဦးက ခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်… တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ ကုံလုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကလို မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တွေ ထွက်နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးကိုဖူးမြော်ခဲ့ရတာမျှဝေပါရစေ။ ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုဒ်မှာ အိမ်က လာခေါ်မယ့်ကားကို …
မပုပ်မသိုးပဲ ယနေ့ အချိန်အထိရှိနေသော ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး…(လိုရာဆုတောင်းပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…)
မပုပ်မသိုးပဲ ယနေ့ အချိန်အထိရှိနေသော ကျေးဇူးတော်ရှင် ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရုပ်ကလပ်ဖြစ်ပါတယ် …. သင်ယနေ့ကံကောင်းချင်ရင် ရှယ်ပါ လိုက်လုပ်ပါ ဒီ အချက်တွေလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငွေကြေး လာဘ်လာဘကံပွင့်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလိ့ု ပြောလို့ရပါပြီ။ အလုပ်မရှိပဲနှင့်တော့ ငွေကြေးများများ လိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ဆိုနေတဲ့ ငွေကြေးကံများ ရသင့်လျှက်ကြန့်ကြာနေသော ငွေကြေး လာဘ်လာဘများအပြင်အခြားသော နေရာများမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကံ နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ …
ရွာတစ်ခုလုံး မီးရအောင် သိန်း(၅၀)လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အပြင် ရွာသူရွာသားတွေကို ဆန်တွေ ဆီတွေ ဝေပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး….😍😘😘
ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့တာက အခုဆိုရင် သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါ ရပ်တည်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ပွင့်လင်းဖော်ရွေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက တကယ့်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းသူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖြူဖြူထွေးကမာန်မာနကင်းသူဖြစ်တဲ့အပြင် အလှူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း လက်မနှေးတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ဖြူဖြူထွေးအနေနဲ့ သူမရဲ့ရွာလေးမှာဆိုရင် မကြာခဏဆိုသလိုတတ်နိုင်သလောက်အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ဖြူဖြူထွေးက သူမရဲ့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေအတွက် ဆန်၊ဆီနဲ့ ငွေကြေးတွေ …
ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကျောခိုင်းကာ အေးချမ်းတဲ့ တရားရိပ်မှာ ပျော်မွေ့နေတဲ့ ယုန်လေး….😲😲👇👇
ပရိသတ်ကြီးရေ…..မကြာသေးမီက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ယုန်လေးရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ‘ငါတို့အား လုံးရဲ့မြေ(စည်းလုံးသင့်ပြီ မြန်မာပြည်)’ ဆိုတဲ့ သီချင်း music videoလေးကိုတော့ လူတိုင်းသိ ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီmvနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကစတင်ကာ ပရိသတ် တွေ ကြား မှာ ဝေဖန်မှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုမြင့်တက်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်အချင်းချင်းကလည်း ယုန်လေးအပေါ်ကို သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့သလို ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်း အများအပြားခံခဲ့ရတာပါနော်။ ယုန်လေးဟာ music videoကိစ္စအတွက်လည်း …
အဖေမရှိပေမယ့် မိခင်နဲ့အတူ ချို့တဲ့စွာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ညီမလေးဆီသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပိုပို
အဖမေရှိပမေယျ့ မိခငျနဲ့အတူ ခြို့တဲ့စှာ ပညာသငျကွားခဲ့ရတဲ့လေးဘာသာ ဂုဏျထူးရှငျ ညီမလေး မိုးမိုးဖွဈခငြျတဲ့ ဆရာမတဈယောကျဖွဈပွီး ညီမလေး ရဲ့ စိတျကူးအိပျမကျလေးကို အကောငျအထညျဖောျနိုငျပါစေ ပိုပို နဲ့ ကိုဟိဏျးသဈစုပေါငျးပွီး တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။အခုလို ညီမလေး မိုးမိုးကို စတေနာအပွညျ့နဲ့ ပညာသငျကွားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာလိုမြိုး ဆရာ ၊ ဆရာမတှလေညျး အမြားကွီးပေါျထှကျလာပါစေ။Source : Po Po
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ မြတ်ဘုရား ဆံတော်ရှင်အစစ်ပါ အများပြည်သူ ဖူးမျှော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးပါအုံးနော်
အရွယ်သေးသော်လည်းအရေးကြွယ်သည့်ကျွန်းနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တို့၌ လင်္ကာဒီပဟုထင်ရှားခဲ့သည့် ဂေါတမဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီး နောက်တွင် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒနေလိုလလိုထွန်းပခဲ့သောကျွန်း၊ ယွန်းဆွမ်းအုပ်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့မြေမျက်နှာပြင်ရှိသည်။မဟာဝံသ၊ ဒီပဝံသခေါ် ရှေးမှတ်တမ်းများဖြင့် ကျွန်းနိုင်ငံ၏သမိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းနှင့်ကျေးကုလားများ၊ ပေါတူဂီနှင့်ဒတ်ချတို့နယ်ချဲ့ပုံ၊ ဗြိတိသျှဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အရေးပါပုံတို့ကိုတင်ပြထားသည်။ ပြာလဲ့လဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ဖြင့် ဝိုင်းရံလျက်ရှိ၍ စိမ်းစိုသာယာလှပသော ရှုခင်းတို့ဖြင့် တင့်တယ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်သော သီဟိုဠ်ကျွန်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဝင် မဟာဝင် စသည့်မြန်မာ့စာပေ ကျမ်းဂန်ကြီးများ၌ ထင်ရှားပါရှိသော …
တန်ဖိုးကြီး စိန်အလုံးပေါင်း ၅၄၄၈ အပြင် ဒေါ်လာ ၈ ဘီလျံကျော် တန်ဖိုးရှိ ရွှေချပ်တွေအုပ်ထားတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်(အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ကမ္ဘာက သုတေသီတွေ ပြုစုထားတဲ့ စာတမ်းတွေအရ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ရွှေတုံး ရွှေပြားများ မရေတွက်နိုင်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာများနဲ့ တည်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့ လုံးပတ်ကို အခေါက်ရွေ တန်ချိန် ၆၀ ကို ရွှေချပ်အထူတွေသွန်းပြီး ဝက်အူနဲ့ စုတ် ထားတာပါ။ ( ၂၀၁၃ ) ဧပြီလစာရင်းအရ …. ၃၂၆ ပေ မြင့်တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့ …
Previous 1 … 99 100 101 102 Next
Copyright © 2021 Myanmar Daily News.